Iindleko zemali zedijithali ezibiza kakhulu ngo-2020. Iyintoni imali ebiza kakhulu yedijithali?
Imali eyi-10 ephezulu kunazo zonke yemali yedijithali ngokuxabisa kwexabiso lentengo enye yedeksi kwi-dollar yase-US (i-USD) okwangoku.
Imali ephezulu kakhulu yedijithali 21/09/2020
Travel1Click (T1C) 14 917 250 708 $
42-coin (42) 44 601 $
Robonomics Web Services (RWS) 42 215 $
yearn.finance (YFI) 29 191 $
Amun Ether 3x Daily Long (ETH3L) 24 184 $
Project-X (NANOX) 17 603 $
Hemelios (HEM) 14 209 $
3X Long Tether Gold Token (XAUTBULL) 11 625 $
The Tokenized Bitcoin (imBTC) 11 119 $
Bitcoin BEP2 (BTCB) 11 063 $
Eyona nto ibiza kakhulu kwi-imali yedatha yinkonzo ye-ptptoratesxe.com ebonisa ii-imali yedatha eziphezulu ngexabiso eliphakamileyo lengqekembe enye kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo.
Inkonzo ye-intanethi "yeyona nto ibiza kakhulu ye-imali yedatha" isebenzisa imithombo evulekile evela kwi-imali yedatha exchanges kwaye iqokelela umyinge weyona nto ibiza kakhulu kwi-crypto ngexesha langempela.
I-imali yedatha ebizayo ithathwa njengeendleko zengqekembe enye. Kuyimfuneko ukwahlula ixabiso leengqekembe zemali kwikapitali ye-imali yedatha i.e. ixabiso elipheleleyo lazo zonke ii-imali yedatha ezikhutshwe yile mali.
Ixabiso elipheleleyo okanye umba wazo zonke iingqekembe ziboniswe enye inkonzo yewebhusayithi Ikhamera ye-imali yedatha yemakethe .
Uluhlu lweyona mali ibiza kakhulu ye-cryptocurrensets ihlala itshintsha, kuba ukurhweba nge-crypto kuyaqhubeka, kwaye i-imali yedatha exchange rate iyakhula okanye ihle.
Sebenzisa inkonzo "ebiza kakhulu ye-crypto" kwi-intanethi kunye nesimahla.
Eyona mali ibiza kakhulu namhlanje 21/09/2020 imelwe kukukhethwa kwee-10 ze-crypto ngendlela yokuhlengahlengisa ukusuka kweyona nto ibiza kakhulu ukuya kwexabiso eliphantsi, kwi-oda yexabiso.
Iindleko eziphezulu ze-crypto ziboniswa kwiidola lula ukuthelekisa.
Umgangatho weyona nto ibiza kakhulu ye-imali yedatha iboniswa namhlanje 21/09/2020, kodwa izinga lihlala libekwe esweni.
Kucacile ukuba ngomso i-cryptocurrensets ebiza kakhulu yangomso iya kuhanjiswa.
Ndwendwela iwebhusayithi yethu kwaye usebenzise inkonzo yeyona nto ibiza kakhulu namhlanje.
Eyona nto ibiza kakhulu i-imali yedatha kwi 2020
Eyona nto ibiza kakhulu i-imali yedatha ye 2020 yinkonzo yethu yasimahla kwi-Intanethi ebonisa eyona nto ibiza kakhulu ii-imali yedatha 2020.
Ukhetho lwe-crypto ebizayo lungena 2020, kodwa sivavanya iinyanga ezi-3 zokugqibela zexabiso lotshintshiselwano. Ixabiso kunye namandla asezantsi ereyithi atshintsha mihla le kwaye ngenxa yoko amaxabiso ethu aphezulu "Ikhamera ye-imali yedatha yemakethe 2020" inokutshintsha yonke imihla.
I-Cryptocurrensets inexabiso eliphezulu.
I-Cryptocurrensets inexabiso eliphezulu-ukulinganisa kwethu lokuvavanya ixabiso leengqekembe zemali. Ingqekembe yeyona nto iqhelekileyo ukubala. Kucacile ukuba ungabhatala kunye nenxalenye yeengqekembe.
Ke, ukulinganisa kwe-imali yedatha ngexabiso eliphezulu kunemeko ethile.
Itheyibhile yeyona nto ibiza kakhulu i-imali yedatha.
Itheyibhile yeyona mali ibiza kakhulu ye-imali yedatha - ibonisa ukubonakalisa kwethu ireyithingi ephezulu yee-imali yedatha.
Kwitheyibhile yeyona mali ibiza kakhulu ye-crypto ungabona igama le-imali yedatha kunye nereyithi yokutshintshiselana kwabo kwiidola zaseMelika.
Xa ucofa enye yezona mali zibiza kakhulu kwi-imali yedatha kwitheyibhile, uya kusiwa kwiphepha lolwazi elineenkcukacha ngomyinge wale crypto.
Itshati ebiza kakhulu ye-imali yedatha.
Itshati ebiza kakhulu ye-imali yedatha sesinye isixhobo simahla kwi-Intanethi esibonisa umgangatho ophezulu weyona mali ibiza kakhulu.
Itshathi yeyona nto ibiza kakhulu ye-imali yedatha ibonisa amaxabiso ezi-10 aphezulu i-cryptos elona xabiso liphezulu.